IKEA oo 400 milyan oo magdhow ah ka bixisay wiil ku dhexdhintay dukaankooda. - NorSom News
IKEA oo 400 milyan oo magdhow ah ka bixisay wiil ku dhexdhintay dukaankooda.
Dukaanka laga leeyahay dalka Sweden ee IKEA ayaa heshiis ku galay inay lacag magdhow ah oo gaareyso 46 milyan oo dollar(400 milyan kr) ka bixiyaan wiil 2 sano jir ah oo ku dhintay gudaha dukaankooda, kaas oo sababsaday khaanad kusoo dhacday. Wuxuuna falkan ka dhacay gobolka California ee dalka Mareykanka.
2 sano jirka geeriyooday ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Jozef dudek. Khaanada wiilkan kusoo dhacday ee dishay ayaa aheyd nooca yar-yar ee buugaagta ama dharka la gashto. Waxeyna hada IKEA suuqa ka saareen nooca khaanayada ee wiilkan yar kusoo dhacday, iyaga oo sheegay inay wax ka badali doonaan designka khaanada.
Lacagta ayaa noqoneyso tii ugu badneyd ee abid kiis noocan oo kale ah laga bixiyo, sida ay qortay USA TODAY.
Xigasho/kilde: Ikea agrees to pay $46 million after tipped dresser kills toddler
Previous articleTV: Norway waxey Jabuuti kala hadashay kiiska Mahad Abiib.
Next articleNorway: Iiraaniyadii saaxiibka la noqotay wasiirka oo amaantay generalkii uu Trump dilay.